Casharkii 20 aad Habka Cilmi-Baarista ee Research Method · Jowhar.com Somali News Leader
by hanad | Saturday, Nov 28, 2015 | 2843 views
Muhiimada Cilmi-baarista (Significance of the Study) Waxaan shaki ku jirin in cilmi-baaris waliba ay leedahay muhiimad u gooni ah oo ay kaga duwan tahay cilmi-baarista kale ee horay loo sameyay.
Marka la qeexaayo muhiimada cilmi-baarista, waxaa lagu qeexaa in ay tahay qoraal looga dhaadhacsiinaayo aqristaha in ay cilmi-baarista tahay mid muhiim ah una qalanto in la amba qaado.
Qorista muhiimada cilmi-baarista waa mid xasaasi ah, maxaa yeelay, waa halka cilmi-baaraha uga dhaadhacsiiyo aqristaha in cilmi-baaristiisa u qalanto in la amba qaado. Guud ahaan, qaybtaan waxay ka jawaabtaa dhoor su’aalood oo ay ka mid tahay, sababtee cilmi-baaristan ugu qalantaa in akhristaha uu akhriyo? sababta qof uu udoonayaa in umaal galiyo cilmi-baarista? Hadii ay soo dhamaato daraasada yaalala wadaagaa oo ka faa’iidaysanayo?
Dhinaca kale Waxaa muhiim ah in la ogaado in xiriir toos ah uu ka dhaxeeyo bayaanka dhibaatada (Problem statement) iyo muhiimada cilmi-baarista (Significance of the study). Cilmi-baaraha waa in uu sheego dhabaatada jirto in xal keeda la soo jeedin doono marka la dhameeyo cilmi-baarista.
Dadka ku xeel dheer cilmi-baarista waxay sheegaan in Muhiimada ay tahay halka laga ogaado in daraasada ay u qalanto in la ambaqaado. Dhinaca kale, macalimiinta jaamacadaha ee qiimeeyo Buuga Qalin jabinta jaamacada, si taxadar leh ayay u akhriyaan tuducda ka hadlayso muhiimada daraasada. Hadii cilmi-baaraha si cad u qeexiwaayo, waxa daraasada ay ku yabooheyso, waxay u badan tahay in ay qadacaan in la amba qaado cilmi-baarsita, taasina waxay dhabar jab ku keeni kartaa dadaalkii uu soo waday cilmi-baaraha mudada dheer.
Cilmi-baaraha waa in uu sheego, halkee banaan ee u baahan in la buuxiyo ee daraasada buuxinaysaa? Cilmi-baaraha waa in uu si cad u sheego waxa daraasada soo kordhinkarto iyo sida looga faa’iidaysan karo. waxaa loo baahanyahay in xog lagasiiyo aqristaha ku saabsan sida cilmi-baaristan ay uga qayb qaadansayo waxa ku soo kordhinta aqoonta hada jirto.
Casharkii 20 aad Habka Cilmi-Baarista ee Research Method jowhar.com
Waxaa loo baahan yahay in la sheego dhoor qodob oo muhiim ka dhigayo in cilmi-baaristan la amba qaado, sida, hadii cilmi-baaristaan la dhameeyo in ay wax ku soo kordhinkarto aragtiyaha jiro (theory contribution) mida dhaqanka (practical contribution) ama qoraaladii hore (literature contribution). Cilmi-baarayaasha qaar ayaa muhiimada waxaa kale oo ay ku daraan, in aan weli daraasad nucaan oo kale ah aan horay loo samayn, sidaas aawadeed ay cilmi-baarista ay tahay mid muhiim ah.
Ugu danbayntii, siyaabo kala duwan ayaa loo qoraa muhiimada cilmi-baarista, waxaase inta badan la isku raacsanyahay in lagu bilaawo guud ahaan waxa daraasada soo kordhinkarto marka la dhameeyo. Waxaa haboon in la sheego, waxa bulshada ka faa’iidayaan cilmi-baaristan, kadib hoos loogu soo daadago waxa gaarka looga faa’iidaysan karo.
Waxaa kale oo muhiim ah in la cadeeyo cida sida tooska ah iyo sida dadban uga faa’iidaysanayso natiijaa cilmi-baarista. Hadii cilmi-baarista la xiriirto caafimaadka, waa in la sheego waxa ay ku soo kordhin karto guud ahaan caafimaadka, gaar ahaan qaybta sida gaar ka ah wax looga qorayo. Sidoo kale, hadii ay cilmi-baarista ay la xiriirto tayada waxbarashada, waa in la sheego guud ahaan waxa ay kusoo kordhin kasto tayada waxbarashada, gaar ahaan qaybta ay sii quseyso sida dugsiyada hoose ama jaamacadaha.
Waxaa soo diryaariyay
Casharkii 7aad Habka Cilmi Baarista (Research Method)